လန်ဒန်က စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး – St Paul’s Cathedral – XIV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » လန်ဒန်က စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး – St Paul’s Cathedral – XIV
လန်ဒန်က စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး – St Paul’s Cathedral – XIV
Posted by Kyaemon on Nov 11, 2012 in Arts & Humanities, Christianity, Community & Society, Cultures, Education, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel | 1 comment
ဒေါ်စုရောက်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ကို ဒို့လဲစိတ်ကူးဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်ဖြစ်အောင် ‘ရောက် ‘ ခဲ့ ပြီး ပို၍ပို၍‘လေ့လာ’ ခဲ့တာ၊
ခုလဲနံမယ်ကြီးSt Paul စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးကိုဝင်ကြည့်ရအောင်၊
စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး နဲ့ Millennium တံတားကြီးရှုခင်း
London – St. Paul’s Cathedral and the Millennium Bridge | Flickr – Photo Sharing!
St.Paul’s and the Millennium Bridge – London, U.K.
The London Millennium Bridge isapedestrian-only steel suspension bridge crossing the Thames and linking Bankside with the City. It is also referred as the “Wobbly Bridge” after an uncomfortable, swaying motion was noticeably felt on the first two days of the bridge’s opening on June 2000. Attempts to modify the bridge to eliminate the vibrations were made and the bridge reopened in 2002. Other than being another architectural marvel on the Thames, the Millennium bridge is also known as the fictional Brockdale Bridge in the 2009 film Harry Potter and the Half-Blood Prince. The alignment of the bridge is also such thataclear view of St Paul’s Cathedral is seen from across the river, framed by the bridge supports.
စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး နဲ့ မီးရောင်စုံလင်းထိန်နေတဲ့ Millennium တံတားကြီးရှုခင်း
London – Colored Lights at the Millennium Bridge, with St. Paul’s | Flickr – Photo Sharing!
Millennium Bridge and St. Paul’s Cathedral – London, UK.
The River Thames isacolorful sight with several bridges displaying colors they don’t normally show onanon-Olympic night. At the Millennium Bridge, lights change every few seconds and createanice psychedelic glow.
(ကားတို့ရဲ့)မီး အမြီးကြိုးတန်း တန်းလန်းတွေနဲ့ကျောင်းတော်ကြီး
Flickr: Search Yen Baet’s photostream
Search results for St Paul’s cathedral
The dome of St Paul’s from underneath
The choir practicing for Evensong, St Paul’s Cathedral
St Paul’s Cathedral, London –aset on Flickr
Henry II ဘုရင်နဲ့ Canterburyကျောင်း Thomas Becket ဘုန်းကြီးတို့က ဘုန်းကြီး(ပိုင်မြေအဆောက်အဦ နဲ့) အခွင့်အရေး ကိစ်စ မှာ အငြင်းပွါးကြရာမှ
Henry II ဘုရင်ရဲ့အမိန့်အရ လက်ပါးစေ ၄ ဦး က ဘုန်းကြီးကိုသတ်သွားတာကို
St Paul စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးဝင်းမှာ အမှတ်တရရုပ်ထုလုပ်ထားတာ၊
Thomas Becket – Wikipedia, the free encyclopedia
Thomas Becket (also known as Saint Thomas of Canterbury, Thomas of London, and later Thomas à Becket;[note 1] circa 1118 – 29 December 1170) was Archbishop of Canterbury from 1162 until his murder in 1170. He is venerated asasaint and martyr by both the Catholic Church and the Anglican Communion. He engaged in conflict with Henry II of England over the rights and privileges of the Church and was murdered by followers of the king in Canterbury Cathedral. Soon after his death, he was canonised by Pope Alexander III.
Jesus ယေရှု တပည့် Paulဘုန်းကြီးကို ရည်ဆူးပြီး ၆၀၄ က မူလ ကျောင်းဟောင်း ကို Ludgate Hill တောင်ပေါ်မှာ စတည်ဆောက်လို့London မြို့မှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ၊
လန်ဒန်မြို့မီးအကြီးအကျယ်လောင်ပြီးနောက် ၁ရ ရာစုနှစ်မှာSir Christopher Wrenက ပြန်လည်တည်ဆောက်တာ၊
ကျောင်းက ၃၆၅ ပေမြင့်လို့ ၁၇၁ဝ မှ ၁၉၆၂ ထိကာလမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ၊
ကမ်ဘာ့စစ်ပွဲကြီးတွေပြီးဆုံးရက်တွေ၊ Queen Victoria Jubilee နှစ်ပတ်လည်တွေ၊
Queen Elizabeth II ရဲ့အသက် ၈ဝ မွေးနေ့၊ Prince Charles နဲ့ Lady Diana Spencer မင်ဂလာဆောင်စတဲ့
နံမယ်ကြီး အခါကြီး အခမ်းအနားတွေကို ဒီကျောင်းမှာဘဲကျင်းပတာ၊
Flickr: Search Studio3productions’ photostream
Search results for st paul’s
London EC4 – St Paul’s Cathedral, City of London –aset on Flickr
London EC4 – St Paul’s Cathedral, City of London
နေဝင် ခါနီးအချိန် ကျောင်းဘက်ကနေလန်ဒန်မြို့လယ်ဘက်ကိုရိုက်တဲ့ရှုခင်း
Flickr: Search kuanhoong’s photostream
ကြေးမုံ the great says:
ရေကာတာပုံလည်း ဟုတ်ဖူး… တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီကို သစ္စာဖောက်ချင်သလား ရဲဘော်ကြေးမုံ၊ အခုချက်ခြင်း ပါတီဌာနချုပ်ကို အစီရင်ခံစာတင်စမ်း။